Xagay iska Qaban la’dahay Maciishaddeenna? - Halbeeg News
Xagay iska Qaban la’dahay Maciishaddeenna?
In kastoo aanan ahayn dhaqaalayahan, sidoo kalana maqaalkani aheyn mid ku qotama cilmi baaris qoto dheer , haddana waxaan go’aansaday inaan ka hadlo dhibaatada maciishadda qaaliga ah iyo qaab nololeedkeenna ee u baahan inaan wax iska weydiinno: Xagay wax iska qaban la’yihiin?
Su’alaaha u baahan jawaabo macquul ah inaan u helno ayaa waxa ka mid ah: Marka la fiiriyo dakhliga dadka shaqeeya ee ku nool magaalooyinka, kharashka ay bixiyaan, sicirka nolasha iyo badeecada (oo ay kamid tahay waxa dalka ka soo baxo),faa’iidada uu rabo qofka Soomaaliga ah ee ganacsadaha ah ama meherad leh inuu faa’iido, lacagta uu rabo qofka Soomaliga ah inuu ku shaqeeyo. Marka la eego arrimahaasi iyo kuwo kale oo la mid ah waxaan ku noolnahay nolol qaali ah, marka la barbardhigo wadamada dariska nala ah ee aan isku heerka nahay ama aan isu dhawnahay dhanka dhaqaalaha iyo heerka horumarka.
Tilmaanta mushkiladda na haysata:
Dhibaatada ayaa waxa ay tahay inteenna shaqeyso iyo kuwa aan shaqaynin, nin dan yar ah iyo nin dambas waynba, waxaa aad u kala fog dakhliga na soo galo iyo lacagta aan kharashgareyno, waxaa kala fog wax soosaarkeenna iyo waxa aan isticmaalno, heerka nolasha aan rabno inaan ku noolaanno iyo xoogga iyo waqtiga aan diyaar la nahay inaan galino shaqada.
Dhibaatadan waa mid baahsan oo ka jirta heer walb;heer qof, qoys iyo mid qaran intaba. marka laga soo tago dadkii reer miyiga ahaa ee Soomaalidii hore oo ay muuqatay in noloshooda ay ahayd mid isu dheellitiran, kuna jaan go’nayd ilaha dhaqaale ee dabiiciga ah iyo deegaanka, meesha kaliya ee culeyska kaga imaanayayna ahayd abaarta iyo colaadda, marka laga soo tago dadkaasi, dhibkan waxa uu inta badan ka jiraa nolasha magaalada, dhibbanayaashana waxa u badan Soomaalida xoolo dhaqatada kasoo jeedo, wayna ku yaryihiin dadka xeebaha degan ee xadaarada leh.
Taasi si lamid ah, arrintan ma aha mid ugub ah oo ku cusub nolasha Soomaalida, mana aha sidoo kale mid la xiriirta oo kaliya xaaladda dagaalka sokeeye iyo maqnaashaha adeegii dowladeed, inkastoo taasi leedahay culeyskeeda, sababtoo ah marka nolasheenna intaan qaran aheyn la barbar dhigo umadaha aan isku heerka nahay xagga nolasha iyo heerka dhaqaale ee dariska nala ah, waxaa cad inaysan nala qabin ololka maciishadda, waana arrinta keentay annagoo ku jirno xaalad colaadeed iyo mid abaar intaba, in dadka dariska nala ah sida Itoobiyaanka iyo kiinyaatiga ay aaminaan in Soomaalidu tahay ummad hodan wada ah.
Hadaba arrintan waxa ay u muuqtaa mid salka ku hayso dhaqan dhaqaalaha iyo qaab nololeedka aan saxda ahayn ee aan ku noolnahay oo u eg qaabka uu u noolyahay qofka balwadda leh. Diinta islaamka waxa ay sheegaysaa inay jiraan dad la yiraahdo “sufahaa” oo ay xaaraan tahay in loo dhiibo masuuliyad iyo mucaamalo maaliyadeed, hadaba sooma moodid inaan u badanay “Sufahaa”, mas’uuliyaddii qoys, shacab iyo middi qaran qeyb kamid ahna loo igmaday qaar Sufaha ah, arrintaasi oo mudan inaan is weydiinno sababaha keenay iyo sida looga bixi karo.
Maxaa na Galiyay Ciriirigan
Culayskan dhaqaale ee haysto qofka iyo qoyska Soomliyeed waxa ay ila tahay in sababaha keenay ay kamid yihiin arrimahan soo socdo:
1– Dhaqanka shaqo naceybka:Dadka Soomaalida inyar ayaa ka shaqaysa, sababtuna ma aha kaliya in ay fursadaha shaqo yaryihiin, inta shaqaysana saacadaha ay shaqeeyaan ma badna, xoogaagii ay soo shaqeeyeenna waxaa gacanta la gashaday in badan oo aan shaqo rabin.
2- Dhaqanka kutiirsanaanta dadka kale: Arrinkaan ayaa keenayo in qofku isku halleeyo qaraabadiisa, haystana damaanad inuusan gaajoonaynin xitaa haddii uusan shaqaynin.
3– Balwadda: oo uu ugu horeeyo qaadka, kana mid yihiin fadhiga mukhaayadaha iyo hoteelada, shaaha sida xad dhaafka ah loo cabbo iyo cunnada banaanka laga cuno maalin walba.
4- Aqoon yarida :gaar ahaan aqoonta la xiriirta dhanka dhaqaalaha, maamulka iyo maareynta misaaniyadda qoyska iyo qofka, taasi oo aad ugusii badan hooyooyinka gacanta ku haya miisaaniyadda qoyska.
6– Qaaraanka lagu bixiyo dhibaatada ay geystaan dadka nolasha ka dhacay: ee bixintiisa waajibka noqday, laakiin aan la iswaydiinaynin mas’uuliyadda qofka geystay mushkulidda soo noqnoqonaysa.
7– Masruufka ma shaqeystayaasha nolasha ka dhacay: ee ehelkooda ay diyaar ula yihiin inay xambaaraan iyaga iyo caruurtooda wax kasta oo ay ku qaadataba.
8– Faanka iyo qabweynida: jaceylka qofka Soomaaliga uu jecel yahay inuu ku noolaado heer ka sarreeya tabartiisa.
Arrimahaasi iyo kuwo kalaba iyadoo ay jireen ayaa waxa sii kordhiyay culayska 30kii sano ee u dambaysay maqnaashaha qorshihii qaran ee dhanka dhaqaalaha, horumarka, abuuris shaqo, iyo adeegii asaasiga ahaa ee ay u baahnayeen shacabka Soomaaliyeed. Dhanka kalana waxaan noqonay suuq furan oo baylah ah oo ay ku soo duuleen shirkadaha waaweyn ee caalamiga, oo ay cid walba doonayso inay buuxiso.
Waxaa hubaal ah inaysan mustaqbalka dhaw soo muuqanin lana sugaynin dowlad Soomaaliyeed oo haqab tirta baahida asaasiga ah ee qofka Soomaliga ah, mana jirto aduunka dowlad wax deeqsiin karta dad aan shaqeysanayn, mana dhacayso xitaa haddii shidaal loo soo saaro Soomaaliya oo boqolaal bilyan oo doolar kusoo dhacdo khasnadda dowladda in ay nolasheenna wax wayn iska badali doonaan hadii aan marka hore wax laga badalin dhaqanka, hodontinimada shidaalkana keeni karto dhib hor leh ( sida wadamada carabta ee khaliijka haysato). Sidoo kale lama sugaayo in qabiil walba helo ganacsade ama wasiir iyo nin madax ah oo dabooli kara baahidooda. Waxaan suurtogal ahayn iyaduna in mucaawino dibadeed iyo kaalmo ay na siiso beesha caalamka uu ku dhargo qoys walba oo Soomaali ah.
Xaqiiqdu waxa ay tahay inaan ogaanno dariiqa kaliya ee lagu gaari karo in la haqab tiro baahi umadeed uu yahay in dadka shaqayn kara oo dhan ay shaqeeyaan, aabaha, hooyada, caruuta qaan gaarka ah, duqeydda dhammaan, qof walba oo shaqeyn kara waa inuu shaqeeyaa ugu yaraan xilli. Sidii dadka oo dhan u shaqeyn lahaayeen, iyo sidii loo maareyn lahaa xoolaha la shaqeeyay waa in olole wayn loo qaado, loogana faa’iideysto talooyinka iyo tosaalooyinka ay na siisay diinteenna Islaamka, dhaqan Soomaaliga hagaagsan iyo cilmiga casriga ah. Waa in arrintani lagu darro qorshaha waxbarasho ee iskuulada, jaamacadaha iyo tababarrada la siiyo qaybaha kala duwan ee bulshada si aan wax uga badalno nolosheenna adag, isbadalkuna noqdo mid ka yimaado xaggeenna.
Ciidamada xasilinta Puntland oo la wareegay ammaanka Garoowe
Itoobiya iyo Eritrea oo ku baaqay in laga shaqeeyo amniga Soomaaliya